Nhau - Yakabatanidzwa mhinduro pane kufambira mberi kwefekitori yedu yeVietnam
Yakabatana mhinduro pane kufambira mberi kwefekitori yedu yeVietnam
Munguva pfupi yapfuura, vatengi vazhinji vane hanya zvikuru nezviri kuitika mufekitori yedu nyowani muVietnam uye vakanyora kakati wandei kuti vabvunze nezve kufambira mberi
Parizvino, nekuda kwedenda re COVID-19, nguva yekuvaka kwefekitori yeVietnam iri kumashure zvishoma, asi kazhinji kutaura, chirongwa ichi chiri kuenderera mberi. Panyaya yekuvakwa kwezvivakwa, mhinduro yatakatambira kusvika zvino inotiudza kuti nguva yekuvaka haizononoke, sekuzivisa kwedu. Iyo fekitori yeVietnam ichavhura sezvakarongwa muna Kubvumbi gore rinouya.
Nekudaro, tichifunga nezve yapfuura kuomesa kwakasimba kweChinese sosi yezvinhu uye zvakapetwa zvakapetwa zvinhu nehurumende yeUS uye kuwedzerwa kunoenderana kuendesa kunze kwekudzivirira mitero pazvinhu zvinotumirwa kubva kune asiri-maChinese mainland inogadzira nzvimbo, parizvino, timu yedu yemakambani emakambani mazano haisati yapa mirau yakajeka pamusoro pemiyero ipi ichashandiswa mukugovera zviwanikwa mafekitori emagetsi emubhedha muVietnam.
Muchokwadi, izvi zvine musoro. Mushure meye semi-apedza zvigadzirwa anotumirwa kubva kuChina uye akatumirwa kuVietnam, kuburikidza nekaviri tsika clearance, ino nhevedzano yezvirongwa ichaunza mutengo we8-9%. Kana United States ichibhadharisa mitero yekudzivirira pazvinhu zvedu zvekunze zveVietnam, mutengo wemutengo weVietnam hauchanakidze uchienzaniswa nemafekitori eChina epasirese. Parizvino, epamusoro-mashandiro akazara otomatiki michina ine yakanyanya kudikanwa yekugashira magetsi, asi mazuva ano, magetsi muVietnam ari kuramba achiomesa zuva nezuva, uye kuitira kuti tione kushanda kwakaringana kwemidziyo, isu tinofanirwa kuvaka yedu yega backup simba rekugadzira system, izvo zvakakura mari. Kunze kwekunge paine kuwedzera kwakanyanya mukuda kwevatengi kudhizaini, zvikasadaro, idzi dzakareba-temu & dzakakura mashandisirwo hadzisi pane razvino bhajeti runyorwa.